पति–पत्नीबीच झगडा भइरहन्छ ? यसो गर्नुहोस् « LiveMandu
पति–पत्नीबीच झगडा भइरहन्छ ? यसो गर्नुहोस्
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार २२:०१
काठमाडौं । पती पत्नीबीच कहिले कही मनमुटाव हुन्छ । कति कुरामा विमति हुन्छ । भनाभन हुन्छ । झगडा हुन्छ । पारिवारिक जीवन चलाउने कुरामा यस्ता खटपट हुनु सामान्य हो ।
तर, यो क्रम पटक पटक दोहोरिन्छ भने त्यसले राम्रो संकेत गर्दैन । पति(पत्नीबीच उत्पन्न यस्ता मतभेतले क्रमस दुबैको सम्बन्धलाई चिरा पार्दै लान्छ । र, यो क्रम जारी रह्यो भने दाम्पत्य जीवन नै तहसनहस हुनसक्छ ।
पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदको घटना पनि बढेका छन् । यसको पछाडि ठूलै कारण हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
सानोतिनो असमझदारीबाट सल्केको झगडाको आागोले कहिले भयानक रुप लिन्छ । यसले दम्पतीलाई अलग त गर्छ नै, उनीहरुका सन्तान, आफन्तलाई समेत यसले नराम्ररी पिरोल्छ ।